Ahoana ny fampitomboan'ny Julius ny ROI an'ny Influencer Marketing | Martech Zone
Ahoana ny fampitomboan'ny Julius ny ROI an'ny Influencer Marketing
Alakamisy, Jona 15, 2017 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Jason Shuman
Ny marketing Influencer no endrika haingana indrindra amin'ny fahazoana an-tserasera. Misy antony marim-pototra — ny angona vao haingana dia manaporofo ny ROI amin'ny fampielezana marketing influencer: Roa ambiny valopolo isan-jaton'ny mpanjifa no mety hanaraka ny tolo-kevitra iray nataon'ny influencer ary isaky ny $ 1 lany amin'ny marketing influencer dia mamerina $ 6.50 Izany no antony hamaritana ny fandaniana amin'ny marketing influencer ny mitombo hatramin'ny $ 1 miliara ka hatramin'ny $ 5-10 miliara ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Saingy, mandraka ankehitriny, ny fanatanterahana fanentanana amin'ny marketing influencer maharesy lahatra dia dingana iray nandreraka sy nandany fotoana. Voalohany, mila mitady kaonty media sosialy ianao mba hamoronana lisitr'ireo influencers izay mety ho mety tsara amin'ny marikao. Avy eo ny fikarohana hahalalana hoe iza no mpanaraka azy, inona ny marika hafa efa naoriny, inona no mety ho vidiny isaky ny lahatsoratra, ary ny fomba ifandraisany amin'ity olona ity. Farany, tsy maintsy manamboatra ny fizotranao sy ny fizotranao ianao handrefesana ny fiantraikan'ny fampielezan-kevitrao. Izany dia niafara tamin'ny andraikitra iray manontolo andro sy feno takelaka ho an'ny mpivarotra.
Julius no vahaolana rindrambaiko ho an'ny marika sy orinasa hanombohana ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing mihodina sy mahomby. Julius dia manome ny fitaovana ilainao amin'ny fikarohana ireo fitaomam-panahy, mampihetsika sy mitantana ny fifandraisanao ary manara-maso ny angona rehetra amin'ny toerana iray. Mamonjy fotoana sy hery ary manome hevi-baovao amin'ny fotoana tena izy handefasana tetikady marketing influencer mahomby.
Afaka miaraka amin'i Julius ianao:
Ampidiro avy hatrany ny angon-drakitra feno izay ilain'ny matihanina amin'ny marketing mba hahafahany manapa-kevitra momba izay iza no afaka mamorona sy misolo tena ny marika. Jereo ny tena tantara amin'ireo olona 50,000 XNUMX mahery. Vakio ny vaovao farany momba ny influencer, jereo ny paoziny momba ny atiny voalohany, ary mahazoa angona antsipirihany momba ny demografik'ireo mpihaino azy. Azonao atao ihany koa ny mahita ny metatra fanatrarana sy fampiroboroboana tambajotra sosialy sivy.
Mitadiava influencer mety miorina amin'ny isa data micro. Raha te hahita olona manana mpanaraka marobe sy marobe ao amin'ny Midwestwest ianao, filan'ny lanitra sy ny vidiny avo lenta ao anatin'ny teti-bolanao? Azonao atao ny mitady azy. Te hahita ve ianao izay mampiasa marika fifaninanana? Azonao atao koa ny mitady an'izany. Julius dia manome angon-drakitra mihoatra ny zava-bita.
Ampitahao ireo izay nanery anao handray fanapahan-kevitra haingana. Ny fampitahana mifanila volo dia mijery anao rehetra hijerena, hanampy ary hifanakalo hevitra momba ny mety ho influencer amin'ny toerana iray.
Tsy miantso mangatsiaka intsony. Manomboha resaka, mahazoa mombamomba ny fifandraisana ary manara-maso ny fifandraisana amin'ny toerana iray.
Ampandraiso anjara ny ekipa iray manontolo. Mitantana mora foana ny fampielezan-kevitra amin'ny ekipa miaraka amin'ny fahitana ny fandrosoana amin'ny resaka fampielezana. Araho ny fanentanan'ny mpiara-miasa aminao hahitanao izay mandeha.
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny Marketing Influencer
Ny marketing amin'ny Influencer dia ahafahan'ny orinasa mifandray mivantana, amin'ny fomba marina ary amin'ny fomba mamorona amin'ny mpihaino azy. Ny fampifangaroana ny filozofia marina sy ny fitaovana mety dia mety hahatonga ny fampielezan-kevitra izay miavaka hatrany amin'ny fahombiazany sy amin'ny vidiny lafo. Mark Gerson, CEO an'ny Julius.
Misy fomba fanao tsara indrindra manaraka ireto:
Mitadiava influencer mety amin'ny hafatrao. Ny varotra influencer mahomby indrindra dia tsy ny fananana olo-malaza pose amin'ny vokatrao fotsiny na ny fanomezana dera diso momba ny serivisinao. Ny momba ny fanasongadinana ny marikao na orinasanao amin'ny fomba izay mamaly ny zava-misy sy tsara amin'ny mpihaino. Hello Fresh leveraged realist star Audrina Patridge's status as a busy, new mom to show the fis-in-a-box in a true mode. Nilaza izy fa ny fanampiana ny fahazoana sakafo ara-pahasalamana eo ambony latabatra haingana dia vahaolana mahavariana ho azy sy ireo renim-pianakaviana vaovao manakarama any ivelany izay miahy ny mahandro. Miasa io singa manokana io.
Tadidio fa ny tsy fivadihana no zava-drehetra. Ny ankabeazan'ny mpanjifa dia tsy maninona miaraka amin'ireo paositra tohana raha mbola mijanona amin'ny lanjan'ny marika izy. Araka ny nolazain'i Tara Marsh of Wunderman tao amin'ny podcast Julius ho avy, ny marketing marketing dia efa nisy farafaharatsiny hatramin'ny nanohanan'ny Royal Family an'i Wedgewood China an-jatony taona lasa izay! Tahaka ny Royal Family izay tena mitaona ny china tsara, ny influencer voafantina araka ny tokony ho izy dia afaka manavaka ny marika mandritra ny fotoana maharitra - toy ny, anisan'ireo ohatra maro, dia mbola mitohy mahita an'i Nike miaraka amin'i Michael Jordan i Nike. Ny fisian'ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny marika sy ny influencer dia tsy misy dikany amin'ny maha-azo itokiana ny fampielezan-kevitra - izay voafaritry ny fisafidianana ny influencer sy ny fahalalahana mamorona ananany.
Miaraha miasa. Manana fahitana manokana ho an'ny fampielezankevitra marketing amin'ny influencer, nefa misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny influencer anao amin'ny fiteny na sary tena tianao hampiasaina. Fantatr'izy ireo tsara ny mpihaino azy ary fantany izay hanana ny fahatsapana tsara indrindra amin'ny zavatra hahomby amin'ny paositra. Tao amin'ny podcast Julius ho avy, Brittany Hennessy avy amin'ny Hearst dia miresaka momba ny “Fitsapana madio madio.” Ny marika iray dia tsy tokony hangataka amin'ny influencer hilaza hoe: "madio mangatsiaka" - fa tokony hanome ny influencer ny fahazoan-dàlana hamorona mba hametraka an'io hevitra io amin'ny fomba mety indrindra aminy sy hamaly ny mpihaino azy.
Tantaran'ny fahombiazan'ny Marketing Influencer
Julies no vahaolana mahomby sy mahomby indrindra ho an'ireo orinasa kely sy lehibe izay tsy afaka mitsitsy isa isa ho an'ny fitantanana manualan'ny fampielezana influencer.
Talohan'izay dia mila miantehitra amin'ny Googling fotsiny isika hahitantsika ireo influencers ary mandeha any amin'ny kaonty media sosialy tsirairay avy mba hahitana vaovao. Tena sarobidy i Julius. Meghan Catucci, mpahay tetikady ao amin'ny AOL / Huffington Post
Ankoatry ny fitehirizana ny fotoana sy ny herin'olombelona, ​​Julius koa dia manafaingana ny fahafahan'ny mpivarotra mampihetsika, manandrana ary manandrana miaraka amina influencer maromaro indray mandeha hahita ny ROI tsara indrindra amin'ny fampielezan-kevitrao. Ho an'ny fampielezan-kevitr'i Access Sports 'Google Photos, dia nanakarama atleta maromaro izy ireo mba hirotsaka an-tsehatra amin'ny mpihaino azy hanaparitaka ny hafatra fa ny Google Photos no fomba tsara indrindra sy mora indrindra itehirizana, hikarohana ary handrindrana sary, amin'ny alàlan'ny diezy #easythrowback. Ny fahaizana mametraka sy manidy fifanarahana marobe miaraka amin'ny fampiasana an'i Julius dia nitahiry ny ora fiasan'ny orinasa.
Manana taham-pahombiazana mahatalanjona amin'ny fampiasana ilay sehatra izahay, manatanteraka fampidirana influencer marobe indray mandeha. Bill Meara, tale jeneralin'ny Access Sports Media.
Andramo ho anao i Julius!
Tags: hery miasa manginahery miasa manginafiankinan-doha amin'ny influencermarketing marketinginfluencer marketing roifanatrarana influencerJuliusfiverenana amin'ny fampiasam-bolaROI
Jason dia Lehiben'ny mpiasa ao amin'ny Julius, Platform Influencer Marketing. Jason dia mpandraharaha ary VC manana traikefa mivantana amin'ny eCommerce ho an'ny mpanjifa, fanombohana tsena roa sy SaaS. Faly i Jason miara-miasa amin'ireo olona mitady hamaha olana sy manome vahaolana sarobidy.
Samy mankahala ny Spam sy ny antso mangatsiaka daholo isika rehetra… Mandra-pahatongantsika